Asiphokophele imfundo eseqophelweni eliphezulu, sivikele inkululeko yethu, kuloba uReuel Khoza - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Izwe ebelithembisa manje selinabaholi ababona ukuthi bangazicaphunela emalini yezwe bayisebenzise noma ngayiphi indlela abayithandayo futhi baphe nobhululu babo, izwe eselibheke ekubeni nabaholi abazofuna ukudla amandla ezakhamuzi zezwe. Osopolitiki nezikhulu zikahulumeni abakhwabanisa udede;
Izwe umbuso walo ogwamandwe wumndeni wokufika, ongelutho ezweni lawo;
Inkohlakalo edlangile eyenza izakhamuzi zingabe zisabethemba abaholi bezepolitiki;
Izinga eliphezulu ngendlela exakile lokuntuleka kwemisebenzi kangangokuthi intsha efundile iphelelwe wumdlandla;
Ukulahleka kukanembeza okubonakala ngobugebengu obubhekiswe kwabesifazane nabantwana, ukunganakwa kwabagulayo nababuthaka;
Igebe lokungalingani elikhulu kunawo wonke emhlabeni;
Abaholi bepolitiki abamandla ekuqhamukeni namaqhinga kunokuwalandela;
Umnotho okleliswe wamubi kodwa abaholi abenza sengathi yinto engathi shu leyo;
Isizwe esixakwe wukubhekana nezinhlekelelo zemvelo okuyizikhukhula, isomiso, ingasaphathwa-ke eyokuqhamuka nezindlela zokubhekana nalezi zimo ngomuso;
Ubuholi obungenanembeza wokugxeka izwe eliphaka impi lihlasela elinye kubulawe abesifazane, izingane nababuthaka futhi kuphoqe izigidi ukuthi zifuduke ezweni lazo lendabuko, ukubala nje okumbalwa.
UMahatma Gandhi waxwayisa ngaloku. Wathi: “Izinto ezizosiqeda yilezi: ipolitiki engenamthetho, yinjabulo engenanembeza, umcebo ongasetshenzelwe, ulwazi olungenasimilo, yibhizinisi elingaziphathi kahle, yisayensi engenabuntu nokukhonza okungahambisani nokuzidela.”
Ngenxa yalezi zinto esengezibalile, iNyuvesi yaKwaZulu-Natali iyisikhungo semfundo ephakeme ihlalelwe yilo msebenzi: Ubuholi kumele bube nombono ocacile futhi bube yisibonelo. Kumele kube nemigomo ecacile futhi ezolandelwa, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngesabelomali nokuphatha imali. Othisha bethu kufanele bazinikele ekuphokopheleni izinga eliphezulu futhi bangakhathali wukwenza loku. Izitshudeni zethu kufanele zazi ukuthi imfundo efanele iyinsika ekubhekaneni nezinselelo zazo, ezezwe, ezesifunda nezwekazi lonke. Ucwaningo lwethu, kungabe kwezokuthuthukisa, ingqalasizinda, izifo ezivame emazweni ashisa kakhulu, ezempilo, umthetho, isayensi nobuchwepheshe, ezamabhizinisi nezenhlalakahle kumele ziqhamuke nezinto ezitsha ezisizayo.
Ngaphandle uma uMkhandlu neNdlu yeziGele yeNyuvesi yaKwaZulu-Natali njengamabhodi okuphatha nokungamela kwezemfundo ungaphoqi ukuthi kulandelwe inqubomgomo, imizamo yokufinyelela ezingeni lomhlaba kwezemfundo, kuyohlale kuyinto esiyibukela kude ezweni nasezwenikazi. Siphila kwintando yabantu lapho imfundo enohlonze ingaphumelela khona.
Ngeke kulindelwe ukuthi izitshudeni zethu zenze kahle ezifundweni (zazo) uma othisha bazo nezinsizakusebenza okumele zizisebenzise zisezingeni eliphansi. Ngeke kulindelwe ukuthi abafundi benze kahle ezifundweni uma bengazilungiselele, behluleka ukwenza umsebenzi. Ngeke kulindelewe ukuthi othisha bazofundisa ngendlela eseqophelweni eliphezulu uma bengagxilile futhi bengazinikele kuloku. Ngeke kulindelelwe ukuthi othisha benze kahle uma bengasekwa ngabaphathi noma kunhlakanhlaka; akumele kulindelwe ukuthi izikhungo zemfundo zizokwenza kahle ezifundweni uma indawo ezisebenzela kuyona iphikisana nentando yabantu. Ngeke kulindelwe ukuthi izikhungo zenze kahle ezifundweni uma zingenazo izinsizakusebenza ezanele.
Ngakho-ke sinejoka lokuvikela ezemfundo nezinye izinhlobo zenkululeko esisazithokozela eNingizimu Afrika. Kumele sisebenzise izinsizakusebenza esinazo futhi sizinikele ukuphokophela ezemfundo. Sihlalelwe wumsebenzi wokuqinisekisa ukuthi ezemfundo ephakeme ziphathwa ngendlela efanele ukuze abakuyona bezogxila ekusebenzeleni imfundo esezingeni elifanele. Kuwumsebenzi wethu ukugqugquzela nokufuna ukuthi othisha nezitshudeni basebenzele ukufinyelela ezingeni lomhlaba.
Sinomsebenzi wokuzivuselela nokuthi sibhekwe njengenye yamanyuvesi okubhekwa kuwona e-Afrika, sizibeke ezingeni lokuba yisikhungo semfundo ephakeme esihlonishwayo ezwenikazi nasemhlabeni.
Kumele sibe yisikhungo esinohlonze ngenxa yokuphatha kwethu nangenxa yokuphatha kahle imali, singangatshazwa; sibe yinyuvesi ecashunwayo ngoba umsebenzi wethu usezingeni lomhlaba kuthi nabafisa ukuba yizitshudeni bacabange thina kuqala, hhayi ukuthi beze kuthina ngoba sebelahlela; sibe yisikhungo esinemifundaze enohlonze ngenxa yeqophelo eliphezulu lokucwaninga nokuthuthukisa kwethu.
Uma kuphathwa igama le-UKZN kufanele abantu babone isithombe sezinga lomhlaba abasibonayo uma kukhulunywa ngamanyuvesi omhlaba okuthiwa ngama-Ivy League eMelika. Kufanele sikusebenzele loku size sikuthole.
Sengiphetha, ngithi asifingqe imikhono. Zitshudeni, othisha momkhandlu ohloniphekile wemfundo okuyiNyuvesi yaKwaZulu-Natali yibani nesibindi, khuthalani ningapheli amandla, niphokophele okuseqophelweni eliphezulu. NgiwuShansela wenu ngithembisa ukwenza loko.
UDkt uKhoza uwuShansela omusha wase-UKZN. Funda umlando wakhe ku: www.umkhanyisi.likhanyiletm.co.za